6 Kuchengetedzwa Kwekutengesa Pasi Payo Euro Iyo Inotyisa Kwazvo | Ehupfumi Zvemari
Pakutanga, iwe unofanirwa kuve nehanya nemasheya ayo anotengesa pazasi peeuro imwe. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti kana mamiriro aya asvika zvakaoma kwazvo kuenda kuruzhinji pamusoro peyuro. Izvi zvinowanzoitika kune ese kukosha ayo akanyudzwa mune ino mamiriro. Parizvino, pane akati wandei makambani akanyorwa anogona kuve nenjodzi yekuvhura nzvimbo kubva ikozvino. Uye kuti iwe urege kuwira mukukanganisa uku ticha tsanangura zvavari uye zvinorevei maunogona kuzviona wakanyura mukuita.
Mukati meichi chirevo chizere, akateedzana ehunhu anoonekwa anochengetedza a kunetseka zvakanyanya kwehunyanzvi chimiro sekuva vanogamuchira mashandiro evashambadzi vadiki nepakati. Kunyanya nekuda kwematambudziko ayo kuitira kuti munguva pfupi nepakati vadzokere kunotaurwa pamusoro peyuniti yeyuro. Ndechipi chiri chinangwa chako chikuru chemwedzi mishoma inotevera.
Urongwa urwu hunosanganisira zvakakosha zvakakosha izvo akanyorwa pane Ibex 35, semamwe mapoka ezvemari kune vamwe vane hunhu hwekufungidzira. Iko hakuna zviripo zvipingamupinyi zvekuti kukosheswa kwavo kuri pazasi uye pamwe nekugona kuti zvinhu zvingatonyanyisa kuwedzera muzvikamu zvinotevera mumisika yemari. Ndiko kutya kukuru kune chikamu chevashandisi vemasheya.
1 Kupunzika kwaBanco Sabadell
2 Sniace pasi pekupera mweya
3 Amper: kunyangwe zvabuda zvacho
4 Deoleo ine njodzi yakazara
5 ZUVA rekubhadhara neOPA yako
Kupunzika kwaBanco Sabadell
Banco Sabadell ndechimwe chekuchengetedzeka kuri mumamiriro ezvinhu akaomarara kana mwedzi mishoma yapfuura migove yayo yanga ichitengesa pamatanho ari padyo nema euro maviri. Mumamiriro ezvinhu anoyeuchidza chaizvo zvakaitika zvakaitika nguva pfupi yadarika neiyo Popular. Kupfuura chikonzero chakaringana chekuve pasina kukosha mune ese mamiriro. Hazvishamise kuti hunyanzvi hwayo hwenyanzvi hunokoka kuti inogona kuramba ichiderera mumwedzi iri kuuya. Takatarisana nemamiriro ezvinhu akashata anoratidzwa nebhengi chikamu zvakawandisa.
Mashandiro anotarisirwa kune ipfupi izwi haakurudzirwe futi, nekuti hazvingashamise kuti vadiki nepakati varimi vanogona kugara akabata pane kukosha kwenguva yakareba. Zviri pachena kuti mitengo yavo inogona kusvika kusvika hafu yeyuro yuniti. Chero zvazvingaitika, chii chakanyanya kuomarara ndechekuti inogona kukunda kupokana kwakakosha kwavanako muyuro yakanaka.
Sniace pasi pekupera mweya
Icho chimwe chechunhu hwemusika wepasirese unoenderera uine njodzi huru uye kuti muzvikamu zvekutengesa zvenguva pfupi yadarika nekusagadzikana kwayo kwakanyanya. Around 0,10 euros pachikamu chimwe nechimwe, icho chinoratidza kusasimba kukuru kwechinzvimbo chayo mumisika yemari. Iko kumwe kwekutya kune chikamu chevashambadziri kuri kuti kambani inogona kutsakatika chero nguva nekuda kwekushomeka kwemutsara wayo webhizinesi. Izvo zvinoitika ndezvekuti pamitengo iyi pane iyo kukosha kwakanyorwa, mashoma mashoma maitiro anozove nesitatimendi yemari yevadiki nevepakati varimi.
Iyo imwe yehunhu hwezvibodzwa zveSpanish izvo zvinofanirwa kunge zvisiri izvo izvozvi. Pane zvishoma chaizvo kuti zviwanikwe kubva pazvinzvimbo zvako uye nekudaro hazvina kukodzera kuisa mari yako iripo nenzira iyi. Nekuti pakupera kwezuva isu takatarisana neimwe yekambani ine kukosha kushoma iyo paradhiso yeMadrid yese uye ichi chinhu chekutora kubva nhasi.
Amper: kunyangwe zvabuda zvacho
Amper Group inowana 48,1 mamirioni euros mu2018 mushure mekubudirira mukutengeswa kwemabhizinesi ayo ese muSouth Pacific, uye ichiwedzera mambure ayo mhedzisiro kubva mukuenderera mberi kwekushanda ka19 nguva ichienzaniswa negore rapfuura. Iyo chakabatanidzwa mhedzisiro yekuenderera mberi kwekushanda, pasina mhedzisiro yemari inowanikwa inosangana nekutengeswa kwemabhizimusi eSouth Pacific, inosvika mamirioni gumi nemaviri euros, inomiririra kuteedzerwa kwe12% yebhajeti ra111,8, uye kusimudzira ka2018 nguva zvichienzaniswa nemhedzisiro. yegore rapfuura.
Kune chikamu chayo, EBITDA inodarika 15,6 mamirioni euros, ichiwedzera kakapetwa kane iyo nhamba yakasvikwa pakupera kwegore rapfuura, uye ichidarika bhajeti ra4 ne12,4%. kusimbisa iyo trajectory yekukura yakatarwa muiyo Strategic Chirongwa
Deoleo ine njodzi yakazara
Imwe yetsika dzakaipisisa yemusika unopfuurira ndiyo inomiririrwa nekambani iyi yakatsaurirwa kushambadza kwemafuta uye yakatonyorwa pazasi 0,10 euros. Nenjodzi chaiyo yekuti pane imwe nguva kana imwe icharega kuverengerwa pamisika yemari uye unogona kurasikirwa neyese mari yakaiswa muzvikamu zvayo. Ivo havafanirwe kunge vari mune chero mari yekudyara uye kunyangwe kuita kwekufungidzira mashandiro sezvo paine zvakawanda iwe zvaunogona kurasikirwa kupfuura kuwana. Usakanganwe izvi kana iwe usiri kuda kuve neshamhu yakaipa kubva zvino zvichienda mberi. Izvo zvatove zvakaoma kwazvo kubuda mune aya akadzika kwazvo mazinga mairi izvozvi.
ZUVA rekubhadhara neOPA yako
Nhoroondo yeketani yechikafu inyaya isingagumi uye ndeimwe yemitengo iwe yausingafanire kutengwa chero zvodini. Kunyangwe zvese zvichizoenderana nekuti vanogona kusimudza here mutengo wemubhadharo wekutora, kunyange hazvo zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti hazvizovi nenzira iyi uye kuti njodzi inogona kutonyanya kukura muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Pasina kutonga kuti ivo vanogona kutodzikisa kukoshesa kwemasheya avo. Kana kunyangwe nesarudzo yekusiya misika yemari. Chimwe chikonzero chekusapinda munzvimbo dzeimwe yeanopisa masheya pamusika weSpanish wemusika. Zvishoma zvinogona kuitwa nekuvhurwa kwenzvimbo kubva zvino zvichienda mberi. Zvakatove zvakaoma kwazvo kuti ubve mune idzi dzakadzika kwazvo mazinga mairi izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 Kuchengetedzwa Kunotengesa Pazasi peEuro Iyo Inotyisa Kwazvo
4 tsika dzinowedzera kukura kwako kugona